Headline Nepal | बजेट निर्माण गर्न पहिले जस्तो सहज कहाँ छ र ! -अर्थमन्त्री पौडेल
बजेट निर्माण गर्न पहिले जस्तो सहज कहाँ छ र ! -अर्थमन्त्री पौडेल
२५ चैत्र, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अवस्थामा मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताएका छन् । बुधबार नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
बजेट निर्माण गर्न पहिले जस्तो सहज कहाँ छ रः अर्थमन्त्री पौडेल